न’क्कली मेडिकल उपकरण बेचेको आ’रोप लागेपछि, चीनले विश्वलाई यस्तो सुझाव दिदै गुणस्तरमा कमी गर्ने कम्पनीलाई का’रवाही गर्ने ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/न’क्कली मेडिकल उपकरण बेचेको आ’रोप लागेपछि, चीनले विश्वलाई यस्तो सुझाव दिदै गुणस्तरमा कमी गर्ने कम्पनीलाई का’रवाही गर्ने !
काठमाडौं। को’रोना’भा’इरसको म’हामारीको सुरुवात चीनको वुहान शहरबाट भएको थियो । त्यसपछि यो भा’इरस विश्वभरी फैलियो । अहिले भने चीनमा कोरो’नाभा’इरसको असर धेरै कम भइसकेको छ । आफ्नो देशमा को’रोनाभा’इरसको प्र’कोप कम भएपछि अहिले चीनले बाँकी विश्वमा मेडिकल उपकरण सप्लाइ गरिरहेको छ । चीनले यसरी निर्यात गरेका सामान कम गुणस्तरका भएको भन्दै युरोपसहितका कैयौं देशले चीनले धो’का दिएको आ’रोप समेत लगाएका थिए ।
यस विषयमा चीन सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले बुधबार एक बयान जारी गर्दै चीन सरकारले मान्यता दिएका कम्पनीसँग मात्र मेडिकल किट खरिद गर्न भनेको छ । चीन सरकारले आफूले मान्यता दिएका कम्पनीहरुको गुणस्तर मापदण्ड अनुसारको भएको भन्दै गुणस्तरमा कमी गर्ने कम्पनीलाई का’रवाही गर्ने चे’तावनी पनि दिएको छ । केही समयअघि इटली, स्पेनसहितका युरोपेली देशले चीनका सामानको गुणस्तर मापदण्ड अनुसारको नभएको बताएपछि चीनले आफ्नो देशका निर्यातकर्ता र उत्पादक कम्पनीलाई क’डाइ गरेको छ ।
छोराको मृ’त्युको ६ महिना बित्न नपाउँदै, बिमा पैसाको लोभमा सासुले गरिन बुहारी सुस्मिताको ह¥त्या
नीति तथा कार्यक्रम: महामारी बिर्साउने विमानस्थलदेखि रेलसम्मका कार्यक्रम
चन्दा संकलन गरेर किनेको पीसीआर मेसिन जडान, सरकारले खरिद गर्ने भनेको मेसिन अझै आएन